Shina SUS304 haingam-pandeha ambony 14 lohan'ny multihead milina mpanefy sy mpanamboatra | Lanja mahay
Ny mpitaingin-doha ambony loha 14 dia apetraka bebe kokoa raha ampitahaina amin'ny haavo 10 loha. Mety amin'ny tetikasa hafainganam-pandeha haingam-pandeha na avo lenta izy io, toy ny tetik'asa famonosana snacks 60-100 / min.
Ny mpandanja multi-loha 14 dia rindrambaiko midadasika kokoa raha oharina amin'ny ambaratonga 10 loha maro loha. Izy io dia mety ho an'ny tetik'asa haingam-pandeha na haingam-pandeha avo lenta, toy ny kitapo 60-100 kitapo / snacks packing.
• Manana fitambarana lanjan'ny 16000 mahery ho an'ny marina kokoa.
• Rafitra fanaraha-maso ny birao maodely, baiko maodelin'ny Smart Weigher no baiko ho an'ny modely rehetra, mora karakaraina.
• Ny faritra mifandraika amin'ny sakafo dia mihintsana tsy misy fitaovana, izay mora ny manadio.
Manaraka: SUS304 mifangaro 24 loha milanja ambony loha